Mogadishu Journal » Ciidamada nabad-galyada Kenya oo howlgal ay ka sameeyeen Nairobi ku qab qabtay dad Soomaali ah
Mjournal : –Ciidamada nabad-galyada dowladda Kenya ayaa howlgal ay ka sameeyeen xalay magaalada Nairobi ayaa la sheegay in ay ku qab qabteen dad Soomaali ah oo ku noolaa xaafadda Islii oo ah xaafad ay ku badan yihiin dadka Soomaalida.
Howl-galka ayaa sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah bilaawday maqribnimdii xalay, waxaana lagu qab-qabtay inta badan dadka Soomaalida ah ee ku nool xaafadda Islii, iyadoo la arkayay ciidamada ammaanka oo istaajinaya gawaarida dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay.
Qaar ka mid ah Soomaalida ku nool xaafadda Islii oo warbaahinta la hadllay ayaa sheegay in ay siweyn uga xumaadeen qab qabashada dadka Soomaalida ah oo aad moodo sida ay hadalka u dhigeen in si gaar ah loo bartilmaameesanayo.
Ilaa hada lama oga sababta keentay qab qabashada dadka Soomaalida ah,, mana jirto wax hadal ah oo ka soo baxay dowladda Kenya oo ku aadan qabqabashada dadka Soomaaliyeed ee ku nool kana ganacsada xaafada Islii ee magaalada Nairobi.
Weerarka bishii horey ka dhacay magaalada Nairobi ee lagu bartilmeedsaday dhismaha ganacsiga Westgate Mall waxaa sheegtay in ay ka danbeysan kooxda Al-shabaab oo ah koox ku xiran urur weynaha Al-Qaacid saldhigyana ku leh Soomaaliya.a